Shina: Mitaky Fitovian-Jo Amin’ny Fanambadiana Ireo Ray Aman-dRenin’ny Ankizy Gay · Global Voices teny Malagasy
Voadika ny 09 Marsa 2013 4:49 GMT
Vakio amin'ny teny Español, Italiano, Magyar, 繁體中文, 简体中文, English
Ray aman-dreninà gay ( lehilahy mifankatia) sy lesbienne ( vehivavy mifankatia) maherin'ny 100 avy any faritra samy hafa any Shina no nandefa taratasy misokatra any amin'ny solontenan'ny Kaongresim-Pirenen'ny Vahoaka any Shina mangataka amin'ny governemanta hanao ny fanambadian'ny mitovy fitaovam-pananahana ho ara-dalàna.
Nampian'ireo Ray aman-dreny, Fianakaviana ary ny Naman'ireo Lesbienne sy Gay any Shina ny famoahana ilay taratasy, izay milaza ny fahasahiranan'ireo gay sy lesbienne any Shina sy ny fitaintainana aterak'izany ho an'ny ray aman-drenin'ireo ankizy gay. Manodidina ny mitovy fananahana (homosexuel) 60 tapitrisa no monina any Shina, ary eo ho eo amin'ny 4 isan-jaton'ny mponina, araka ny voarakitra ao anatin'ilay taratasy :
Efa ho nandritra ny 10 taona ny sasany amin'ny zanakay no niaina niaraka tamin'ny vadiny. Mifankatia sy mifampikarakara izy ireo, saingy tsy mbola voasoratra ho isan'ny fianakaviana ara-dalàna rehefa marary sy mila fandidiana ny iray. Mazana izahay no miasa saina momba an'io. Mametraka azy ireo amin'ny toeran-tsarotra ny tsy maha-ara-dalàna ny fanambadian'izy ireo rehefa mihevitra ny hanangan-jaza, amin'ny fanaovana sonia ny fandidiana ny ankilany, fandovàna izay maty, na hividy trano.
Nivoaka ny vaovao momba ilay taratasy taorian'ny tsy nanomezana alàlana ny fisoratam-panambadiana ho anà vehivavy lesbiennes roa tamin'ny tamin'ny fiandohan'ny herinandro tany Bejing.
Nanomboka teo dia nanjary lohahevitra mafana tao amin'ny tranonkala Sina Weibo, fanoratana bilaogy kiritika any Shina ny resaka fanambadiana gay. Nahitàna ady hevitra 22.994.467 ny fikarohana ny teny hoe “gay marriage” ny tolakandron'ny 27 Febroary 2013.
Lesbienne (vehivavy mifankatia) mitàna ny soratra hoe : “te-hivady izahay.” (Dikasary avy amin'ny youku)
Voalahatra hatao amin'ny 5 Martsa 2013 izao ny fivoriana fanao isan-taonan'ny Kaongresim-irenen'ny Vahoaka. Na dia tsy mbola nisy nanao fanamarihana aza ireo solontenan'ny mpivory hatreto, maro amin'ireo Shinoa manampahaizana no mihevitra fa mahavelom-bolo ny fahitàna adihevitra misokatra momba io resaka io.
Nanadihady i Yuan Yulai, mpisolovava [zh]:
Tsy tahaka ny taloha intsony i Shina.
Izao no nosoratan'i Lian Peng, mpanao gazety malaza [zh]:
Tsikaritra tao amin'ny Vaovaon'ny Weibo Xinhua ny fampitandremana ny vondrom-piarahamonina gay, ary naverin'ny Sina news indray ilay “taratasy misokatra” ho vaovao malaza. Heveriko fa fambara tsara izany. Lavitra ny làlana mbola hizorana amin'ny fanambadiana gay, nefa, na ekenao na tsia, dia tokony ho fantatrao fa ny firehana ara-pananahana dia tsy miova araka ny sitrapon'ny olona iray, ho an'ireo izay tsy mitovy amintsika, dia tokony hianatra hanaja, hahafantatra ary handefitra isika, io karazanà rafi-piarahamonina io dia tena malalaka sy feno fandeferana.
I Li Mu, mpanao gazety Shinoa iray miaina any Kanadà kosa dia tena manantena vokatra tsara [zh]:
Ho eken'ny lalàna ny fanambadian'ny mitovy taovam-pananahana any Shina, rsaka fotoana no sisa.
Na izany aza, nanakiana mafy ny fanambadiana gay ireo sasany mpiserasera amin'ny aterineto. I Lu Qi, tonian-dahatsoratry ny tranonkalanà tantara, dia nanentana ny fanakanana ny fanambadiana gay :
Na dia tany aloha be tamin'ny fanjakan'i Shang sy Zhou aza, dia efa nisy lalàna nanohitra ny fanambadian'ny mitovy taovam-pananahana ( homosexuel). Hita fa manelingelina ny fiarahamonina ny firoboroboan'ny homosexuel. Henjana ny sazin'ny homosexuel taloha ela be tany Eoropa fahagola. Ankehitriny, eto amin'ny tanintsika, miaraka amin'ny fanalalahana ny fampifandanjana ny lahy sy ny vavy sy ny firoboroboan'ny vondrom-piarahamonina gay, dia tena maika ny hanaovana lalàna mandrara ny fanambadiana gay. Antso ataonay ity handraràna ny fanambadiana gay ary tsy hahatsiaro ho menatra intsony ny ray aman-dreny.
Tsy voalohany izao no niresahana teny ambony latabatra ny fanambadiana gay any Shina. Tany am-piandohan'ny 2007, nisy fanadihadiana nataonà mpandinika momba ny fitaovam-pananahana (sexologue) Li Yinhe izay naneho fa any amin'ireo tanàna salantsalany -sy ireo tanàn-dehibe ao Shina dia maherin'ny 80 isan-jato no mino fa noforonina hitovy ny homosexuel sy ny heterosexuel (fiarahan'ny tsy mitovy taovam-pananahana). Tamin'ny volana Martsa 2012, ray aman-dreninà Shinoa homosexuel 10 no nanoratra ho amin'ny vondrona mpanolotsaina momba ny lalàna sy ireo mpisolovava ara-politika any Shina mba hamoahana lalàna manameloka ny fanavakavahana ireo gays.
Ny vinavina nataon'ilay sexologue Zhang Beichuan dia milaza fa homosexuel manodidina ny 10 tapitrisa no manambady heterosexuel any Shina, ary eo ho eo amin'ny 80 na 90 isan-jaton'ny lehilahy gay no efa nanambady na mety hanambady vehivavy heterosexuel.